Uzishumpule umunwe ebongela abathole ibheyili | News24
Uzishumpule umunwe ebongela abathole ibheyili
Bangalore - Usomabhizinisi uzinqume umunwe ekhombisa ukubonga kwakhe kunkulunkulu wakhe ngemuva kokuba abaholi beqembu eliphikisayo eNdiya, uSonia noRahul Gandhi, bethole ibheyili enkantolo, ngokwemibiko yangeSonto.
U-Induvalu Suresh, 35, uzishumpule ucikicane ngenyanga edlule ngaphambi kokuba azibophe ngemali eyiphepha, wabe eseyishiya ethempelini lamaHindu njengomnikelo, ngokombiko weTimes of India.
Lo somabhizinisi waseRamanagara ngaseningizimu yedolobha iBangalore uthe wathembisa ngokwenza into engajwayelekile uma laba benikezwa ibheyili.
Funda nalolu daba: Kubulawe 18 kuhlaselwa ezitolo
“Ngigoqe umunywe ngemali engamaphepha engu-1 000 rupee (R248) ehambisana nencwadi yokubonga unkulunkulu ngokunikeza uSonia noRahul ibheyili, ngabe senginikela ngayo ethempelini,”kusho uSuresh ephephandabeni.
“Angizwanga zinhlungu ngesikhathi ngizinquma. Ngokuhamba kwesikhathi ngiye esibhedlela esiseduze kwethempeli, ngatshela udokotela ukuthi umunywe wami unqamuke ngesikhathi ngikhanda imoto,” usho kanje.
Laba baholi bakwaGandhis, beqembu leCongress Party baboshwa ngenyanga edlule ngezinsolo zokuxhaphaza izimali zephephandaba elaliphethwe yilo mndeni.